ငွေကုန်ကြေးကျသက်သာစွာနဲ့ အိမ်မှာအလွယ်တကူလုပ်နိုင်မယ့် Face Mask (၃) ခု - For her Myanmar
ငွေကုန်ကြေးကျသက်သာစွာနဲ့ အိမ်မှာအလွယ်တကူလုပ်နိုင်မယ့် Face Mask (၃) ခု
မျက်နှာလေး Glow ဖို့ ပိုက်ပိုက်အများကြီးအကုန်ခံစရာ မလိုပါဘူး
ယောင်းရေ…ခေတ်ကိုက Glow ခေတ်ဆိုတော့ လူတိုင်းက glow ချင်တိုင်း glow လို့ရအောင် အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုကို အပြိုင်အဆိုင်လုပ်လာကြပါပြီ။ Glow ဖို့ဆိုရင် Face mask တွေကလည်း အရေးပါတဲ့ကဏ္ဍမှာ ရှိနေတယ်လေ။ ဒါပေမဲ့ တခြား skin care တွေလည်းဝယ်ရ Face mask လည်းဝယ်ရဆိုရင် လမကုန်ခင်ထဲက ပိုက်ဆံအိတ်ကလေး လုံးပါးပါးရချည်ရဲ့။ ဒါကြောင့်ယောင်းတို့မကုန်သင့်တာမကုန်ရဘဲ ဘတ်ဂျက်ချွေတာလို့ရအောင် ယောင်းတို့ကိုယ်တိုင် အိမ်မှာလုပ်လို့ရတဲ့ face mask လေးတချို့ကို Stella ပြောပြပေးမယ်နော်။
မျက်နှာအသားအရေက မွဲခြောက်ခြောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ယောင်းတွေအတွက်ကတော့ စတော်ဘယ်ရီနဲ့ ဒိန်ချဉ် လေးက အသုံးဝင်မှာပါ။ စတော်ဘယ်ရီသီးမှာ ဗီတာမင်စီနဲ့ Antioxidants ဓာတ်တွေ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး ဒိန်ချဉ်မှာ လက်တစ်အက်ဆစ်ပါဝင်တာကြောင့် မျက်နှာပေါ်က ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။
– ခပ်မှည့်မှည့်စတော်ဘယ်ရီသီးအလုံးကြီး (၃) လုံးလောက်ကို ခွက်ထဲထည့်ပြီးခြေပါ။
– ဒိန်ချဉ် (၂) ဇွန်းနဲ့ ပျားရည်တစ်ဇွန်းထည့်ပြီး သမအောင်မွှေပါ။
– စတော်ဘယ်ရီတွေအကုန်ကြေပြီး ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအကုန်သမပြီဆိုရင် မျက်နှာပေါ်တင်လို့ရပါပြီ။
အသားခြောက်တဲ့သူဆို (၁၀) မိနစ်ဝန်းကျင်လောက်ထိထားပါ။ အဆီပြန်တဲ့ အသားအရေပိုင်ရှင်ဆိုရင်တော့ (၁၅) မိနစ်လောက်ထားပေးပါနော်။
Related article >>> အသားအရေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်း(Foundation)ကို ဘယ်လိုရှာရမလဲ ?
(၂) အဆီတွေကို ဖယ်ရှားဖို့
အဆီပြန်လို့ အရမ်းစိတ်ညစ်ရတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေရှိတယ်ဟုတ် ဒီ Mask လေးကို စွဲသုံးပေးရင် အဆီပြန်တာကို ခေါင်းထဲထည့်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ ငှက်ပျောသီး ၊ လိမ္မော်ရည် ၊ ပျားရည်လေးနဲ့ မျက်နှာပေါင်းတင်မယ်ဆိုရင် မျက်နှာပေါ်က မလိုအပ်တဲ့အဆီတွေကို တာ့တာပြနိုင်ပါပြီ။
– ငှက်ပျောသီးမှည့် (၁) လုံးကို ခွက်ထဲမှာ ထည့်ခြေထားပါ။
– ပျားရည်စစ်စစ် (၂) ဇွန်းထည့်ပြီး သမအောင်မွှေပါ။
အရင်ဆုံး ကြက်သီးနွေးရေလေးနဲ့ မျက်နှာသစ်ပေးပါ။ ပြုလုပ်ထားတဲ့အရောကို မျက်နှာပေါ်မှာ မိနစ် (၂၀) လောက်ထားပြီး ပေါင်းတင်ပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ ကြက်သီးနွေးရေလေးနဲ့ပဲ ရေပြန်ဆေးချပေးပါ။
ရှားစောင်းလက်ပပ်နဲ့ သခွားသီးမှာ ပါဝင်တဲ့ဓာတ်တွေဟာ ရေဓာတ်ကိုဖြည့်ပေးပြီး အသားအရေကို နုပျိုစေပါတယ်။
– သခွားသီးတစ်ဝက်လောက်ကို မထူမပါးအကွင်းလေးတွေအဖြစ် လှီးပေးပါ။
– Blender ထဲထည့်ပြီး ရေလိုခပ်ကျဲကျဲအရည်ဖြစ်လာတဲ့အထိ ကြိတ်ပါ။
– ရှားစောင်းလက်ပတ်ဂျယ်လ် (၂) ဇွန်းလောက်ထည့်ပြီး အနှစ်ဖြစ်လာတဲ့အထိ သမအောင်မွှေပါ။
အနှစ်ကို မျက်နှာပေါ်မှာလိမ်းပြီး နာရီဝက်လောက်ထားပါ။ ပေါင်းတင်ထားတဲ့အချိန်မှာ ယောင်းလုပ်စရာရှိတာလုပ်နေလို့ ရပါတယ်။ နာရီဝက်ပြည့်ရင်တော့ မျက်နှာကို ရေအေးအေးလေးနဲ့ ဆေးချပေးပါနော်။
ဒီ face mask တွေဟာဆိုရင် ဈေးကြီးတဲ့ကုသမှုတွေ skin care တွေမလိုဘဲ ယောင်းရဲ့မျက်နှာအသားအရေကို ကျန်းမာတဲ့အသွင်အဖြစ် အမြန်ဆုံးပြောင်းပေးမှာပါ။ ထွေထွေထူးထူးပါဝင်ပစ္စည်းတွေမလိုတဲ့အပြင် အိမ်မှာပဲ လွယ်လွယ်ကူကူပြုလုပ်လို့ရတာမို့ ဘတ်ဂျက်ချွေတာရာရောက်ပြီး အချိန်ကုန်လည်း သက်သာစေပါတယ်။ ယောင်းတို့ ဒီထက်ပိုလှနိုင်ပါစေနော်…
မကျြနှာလေး Glow ဖို့ ပိုကျပိုကျအမြားကွီးအကုနျခံစရာ မလိုပါဘူး
ယောငျးရေ…ခတျေကိုက Glow ခတျေဆိုတော့ လူတိုငျးက glow ခငျြတိုငျး glow လို့ရအောငျ အသားအရထေိနျးသိမျးမှုကို အပွိုငျအဆိုငျလုပျလာကွပါပွီ။ Glow ဖို့ဆိုရငျ Face mask တှကေလညျး အရေးပါတဲ့ကဏ်ဍမှာ ရှိနတေယျလေ။ ဒါပမေဲ့ တခွား skin care တှလေညျးဝယျရ Face mask လညျးဝယျရဆိုရငျ လမကုနျခငျထဲက ပိုကျဆံအိတျကလေး လုံးပါးပါးရခညျြရဲ့။ ဒါကွောငျ့ယောငျးတို့မကုနျသငျ့တာမကုနျရဘဲ ဘတျဂကျြခြှတောလို့ရအောငျ ယောငျးတို့ကိုယျတိုငျ အိမျမှာလုပျလို့ရတဲ့ face mask လေးတဈခြို့ကို Stella ပွောပွပေးမယျနျော။
မကျြနှာအသားအရကေ မှဲခွောကျခွောကျဖွဈနတေယျဆိုတဲ့ယောငျးတှအေတှကျကတော့ စတျောဘယျရီနဲ့ ဒိနျခဉျြ လေးက အသုံးဝငျမှာပါ။ စတျောဘယျရီသီးမှာ ဗီတာမငျစီနဲ့ Antioxidants ဓာတျတှေ ကွှယျဝစှာပါဝငျပွီး ဒိနျခဉျြမှာ လကျတဈအကျဆဈပါဝငျတာကွောငျ့ မကျြနှာပျေါက ဆဲလျသတှေကေို ဖယျရှားပေးပါတယျ။
– ခပျမှညျ့မှညျ့စတျောဘယျရီသီးအလုံးကွီး (၃) လုံးလောကျကို ခှကျထဲထညျ့ပွီးခွပေါ။
– ဒိနျခဉျြ (၂) ဇှနျးနဲ့ ပြားရညျတဈဇှနျးထညျ့ပွီး သမအောငျမှပေါ။
– စတျောဘယျရီတှအေကုနျကွပွေီး ပါဝငျပစ်စညျးတှအေကုနျသမပွီဆိုရငျ မကျြနှာပျေါတငျလို့ရပါပွီ။
အသားခွောကျတဲ့သူဆို (၁၀) မိနဈဝနျးကငျြလောကျထိထားပါ။ အဆီပွနျတဲ့ အသားအရပေိုငျရှငျဆိုရငျတော့ (၁၅) မိနဈလောကျထားပေးပါနျော။
Related article >>> အသားအရနေဲ့ လိုကျဖကျတဲ့ ဖောငျဒေးရှငျး(Foundation)ကို ဘယျလိုရှာရမလဲ ?
(၂) အဆီတှကေို ဖယျရှားဖို့
အဆီပွနျလို့ အရမျးစိတျညဈရတဲ့ အခိုကျအတနျ့တှရှေိတယျဟုတျ ဒီ Mask လေးကို စှဲသုံးပေးရငျ အဆီပွနျတာကို ခေါငျးထဲထညျ့စရာမလိုတော့ပါဘူး။ ငှကျပြောသီး ၊ လိမ်မျောရညျ ၊ ပြားရညျလေးနဲ့ မကျြနှာပေါငျးတငျမယျဆိုရငျ မကျြနှာပျေါက မလိုအပျတဲ့အဆီတှကေို တာ့တာပွနိုငျပါပွီ။
– ငှကျပြောသီးမှညျ့ (၁) လုံးကို ခှကျထဲမှာ ထညျ့ခွထေားပါ။
– ပြားရညျစဈစဈ (၂) ဇှနျးထညျ့ပွီး သမအောငျမှပေါ။
အရငျဆုံး ကွကျသီးနှေးရလေေးနဲ့ မကျြနှာသဈပေးပါ။ ပွုလုပျထားတဲ့အရောကို မကျြနှာပျေါမှာ မိနဈ (၂၀) လောကျထားပွီး ပေါငျးတငျပေးပါ။ ပွီးရငျတော့ ကွကျသီးနှေးရလေေးနဲ့ပဲ ရပွေနျဆေးခပြေးပါ။
ရှားစောငျးလကျပပျနဲ့ သခှားသီးမှာ ပါဝငျတဲ့ဓာတျတှဟော ရဓောတျကိုဖွညျ့ပေးပွီး အသားအရကေို နုပြိုစပေါတယျ။
– သခှားသီးတဈဝကျလောကျကို မထူမပါးအကှငျးလေးတှအေဖွဈ လှီးပေးပါ။
– Blender ထဲထညျ့ပွီး ရလေိုခပျကြဲကြဲအရညျဖွဈလာတဲ့အထိ ကွိတျပါ။
– ရှားစောငျးလကျပတျဂယျြလျ (၂) ဇှနျးလောကျထညျ့ပွီး အနှဈဖွဈလာတဲ့အထိ သမအောငျမှပေါ။
အနှဈကို မကျြနှာပျေါမှာလိမျးပွီး နာရီဝကျလောကျထားပါ။ ပေါငျးတငျထားတဲ့အခြိနျမှာ ယောငျးလုပျစရာရှိတာလုပျနလေို့ ရပါတယျ။ နာရီဝကျပွညျ့ရငျတော့ မကျြနှာကို ရအေေးအေးလေးနဲ့ ဆေးခပြေးပါနျော။
ဒီ face mask တှဟောဆိုရငျ ဈေးကွီးတဲ့ကုသမှုတှေ skin care တှမေလိုဘဲ ယောငျးရဲ့မကျြနှာအသားအရကေို ကနျြးမာတဲ့အသှငျအဖွဈ အမွနျဆုံးပွောငျးပေးမှာပါ။ ထှထှေထေူးထူးပါဝငျပစ်စညျးတှမေလိုတဲ့အပွငျ အိမျမှာပဲ လှယျလှယျကူကူပွုလုပျလို့ရတာမို့ ဘတျဂကျြခြှတောရာရောကျပွီး အခြိနျကုနျလညျး သကျသာစပေါတယျ။ ယောငျးတို့ ဒီထကျပိုလှနိုငျပါစနေျော…
Tags: Beauty, DIY, Face Mask, Health, Home Made, self care, skin care, tips